Yintoni amatye okuzalwa? Yesintu neyangoku. Uhlaziyo olutsha ngo-2021
Sikwazisa ukuba yonke into malunga neendawo zokuzalwa ayikho isayensi. Ngoko ke sishiya intsimi yesayensi yezemvelo.
Abantu abaninzi banomdla kwesi sihloko, ngoko ke iziphumo zophando lwethu ukunika inkcazo echanileyo yezinto zokuzalwa.
Ilitye lokuzalwa lilitye elinqabileyo elimele inyanga yokuzalwa komntu.
Umbhali-mbali wenkulungwane yokuqala ongumJuda uJosephus wayekholelwa ukuba kukho unxibelelwano phakathi kwamatye alishumi elinesibini kwisigcina-sifuba sika-Aron. Ukuchaza izizwe zakwaSirayeli, njengoko kuchaziwe kwiNcwadi yeEksodus. Iinyanga ezilishumi elinambini zonyaka, kunye nemiqondiso elishumi elinambini ye zodiac.
Ukuguqulelwa kunye nokutolikwa kwendinyana kwiEksodus ngokubhekisele kwisigcina-sifuba kwahluka kakhulu. UJosephus ngokwakhe unika uluhlu ezimbini ezahlukeneyo zamatye alishumi elinambini. UGeorge Kunz uthi uJosephus wabona isigcina-sifuba seTempile yesibini, hayi le ichazwe kwiEksodus. USt. Jerome, ebhekisa kuJosephus, uthe iSiseko Stones seNew Jerusalem siyakulunga ukuba amaKristu asisebenzise.
Ngenkulungwane yesibhozo neyesithoba, kubhalwa inkolo enxulumanisa ilitye elithile nompostile, ukuze “igama labo libhalwe kwiLitye leSiseko, nakwisidima sakhe.” Ukuziqhelanisa kwaba kukugcina amatye alishumi elinambini kwaye unxibe elinye ngenyanga.
Isiko lokunxiba ilitye lokuzalwa elinye kuphela kwiinkulungwane ezimbalwa ezadlulayo, nangona abasemagunyeni bale mihla bengafani ngemihla. I-Kunz ibeka isiko ngenkulungwane yeshumi elinesibhozo ePoland, ngelixa iGemological Institute of America iyiqala eJamani kwii-1560s.
Uluhlu lwanamhlanje lwamatye okuzalwa alunanto yakwenza nesigcina-sifuba okanye iSiseko seSiseko sobuKristu. Iincasa, amasiko kunye neenguqulelo ezididayo zibasusile kwimvelaphi yabo, omnye umbhali ebiza uluhlu lwase-Kansas lowe-1912 “engenanto ngaphandle kwentengiso engenasiseko.”
Imveli yamandulo yokuzalwa yendawo yamatyala okuzalwa asekuhlaleni. Itheyibhile engezantsi iqulethwe ngamatye amaninzi ayenziwa ngokukhetha, edla ngokubonisa isiko lesiPolish.
Kukho imibongo ehambelana nenyanga nganye yekhalenda kaGregory nelitye lokuzalwa. La ngamatye emveli oluntu oluthetha isiNgesi. UTiffany & Co upapashe le mibongo okokuqala kwincwadana ngo-1870.
Amatye okuzalwa namhlanje
Kwi-1912, ngomgudu wokumisa izakhiwo zokuzalwa, i-American National Association of Jewelers, ekuthiwa yiIelers of America, idibene ne-Kansas kwaye yamukelwa ngokusemthethweni uluhlu. I-Jewelry Industry Council yaseMelika ihlaziye uluhlu kwi-1952 ngokufaka uAlexandrite ngoJuni, isibulali ngoNovemba kunye nepinki tourmaline ye-Okthobha.
Baphinde bathabatha indawo kaDisemba ka Zircon kwaye utshintshe izinto eziphambili / ezinye izinto ngoMatshi. I-American Gem Trade Association nayo yongezelela tanzanite njengelitye lokuzalwa likaDisemba kwi-2002. Kwi-2016, i-American Gem Trade Association kunye neeJellers of America zongezwa spinel njengelitye lokuzalwa elongezelelweyo ngo-Agasti.
Umbutho wase-Bhritane weSizwe wase-Bhritane nawo uzenzele uluhlu lwabo olusemgangathweni lwamatye okuzalwa ngo-1937.
Iinkcubeko zaseMpuma zamkela uluhlu olufanayo lwamatye anxulunyaniswa nokuzalwa, nangona kunokuba kunxulunyaniswe nenyanga nenyanga yokuzalwa, amatye anxulunyaniswa nemizimba yezulu, kunye nokuvumisa ngeenkwenkwezi kuqeshwe ukumisela amatye anqabileyo asondele kakhulu kwaye aluncedo kumntu othile.
Umzekelo, kubuHindu kukho amatye anqabileyo alithoba kwiNavagraha. Imikhosi yasezulwini kubandakanya iiplanethi, kunye nelanga, nenyanga, eyaziwa ngesiSanskrit njengeNavaratna (amatye asithoba).
Ekuzalweni, itshathi yeenkwenkwezi nayo ibalwa. Amatye athile ayacetyiswa ukuba anxitywe emzimbeni ukukhusela iingxaki ezinokubakho. Ngokusekwe kwindawo yale mikhosi esibhakabhakeni kwindawo ngqo kunye nexesha lokuzalwa.
Amanqaku okuzalwa ngamasiko
Inyanga Inkulungwane ye-15 - 20 US (1912) US (2016) Britani (2013)
uJanuwari garnet garnet garnet garnet
iparele neametiste neametiste neametiste
EyoKwindla kwegazi, nejeyidi kwegazi,
UTshazimpuzi idayimani, isafire idayimani idayimani idayimani, rock akhazimlayo
UCanzibe nelesmarado, ngeerubhi nelesmarado nelesmarado nelesmarado, yikrizoprazi
Isilimela iliso lekati,
odidi, ngeerubhi iparele, Ingxelo IweMpathombi iparele, Ingxelo IweMpathombi,
alexandrite iparele, Ingxelo IweMpathombi
EyeKhala odidi, ebherilo ilitye elinqabileyo elibomvu ilitye elinqabileyo elibomvu rubysi, nelesardiyo
EyeThupha sardonyx, nelesardiyo, inyanga yenyanga, netopazi sardonyx, peridot peridot, spinel peridot, sardonyx
EyoMsintsi chrysolite isafire isafire isafire, i-lapis lazuli
EyeDwarha yihakinto, aquamarine yihakinto, tourmaline yihakinto, tourmaline yihakinto
EyeNkanga netopazi, iparele netopazi netopazi, isibulali netopazi, isibulali
EtiMnga ilitye legazi, iruby odidi, i-lapis lazuli odidi, Zircon,
tanzanite tanzanite, odidi
Neswili-uhlalele-bahlale 7.54 CT
I-Opalite 4.60 ct
I-sapphire yenkwenkwezi emnyama 2.23 ct
IVesuvianite 1.84 ct
Ilitye lenyanga elimnyama lenyanga 5.95 ct